विचार / विश्लेषण एउटा ‘भिलेन’को कारुणिक कहानी
Saturday, 11 Jun, 2016 11:32 AM
३५ वर्षदेखि अभिनयमा रहेका रमेश बुढाथोकी अक्सर फिल्म र टेलिफिल्ममा ‘भिलेन’मा जमेका कलाकार हुन् । चार दर्जन फिल्म र चौध भन्दाबढी टेलिफिल्ममा अभिनय गरेका बुढाथोकीले १२ वटा टेलिफिल्मको निर्देशन समेत गरेका छन् । फिल्म र टेलिफिल्म प्रायः सबैमा उनले भिलेनकै रोल खेले । पर्दाको कथामा डरलाग्दो डाकु देखिने बुढाथोकीको आफ्नो जीवन भने निकै करुणामय छ । भिनेतृ पत्नी बिना बुढाथोकी दुई छोरीसहित १२ वर्ष अघिदेखि देशबाहिर छन् । कलाकारिता जीवन र काठमाडौंमा रमेशको एक्लो जीवनबारे बिनु पोखरेलले उनीसँग कुराकानी गरी तयार पारेको रिपोर्टः कलाकार नै हुन्छु भन्ने दिमागमा थिएन । केटाकेटीदेखि नै स्कूलमा अभिनय गरिन्थ्यो । वाल्यकालमा स्कूल र घरमै पनि साथीहरुसँग चोर–पुलिस खेल खेलिन्थ्यो । त्यसै बेलादेखि अभिनयमा सोख जाग्यो । मभित्र त्यही थियो होला सायद, अनि त्यही निस्कियो । नभए त स्कूलका अरु साथी जस्तै स्कूलफष्ट गरेर सरकारी जागीरमा नाम निकालेर जागीर खाएर बस्थेँहोला । तर म फरक हुनाले नै उनीहरुको र मेरो बाटो छुट्टियो । त्यो २०३५ सालको कुरा हो । म एसएलसी दिएर बसेको थिएँ । त्यसबेला दियालो परिवार नाट्य समुह भन्ने एउटा ग्रुप थियो । त्यसमा म आबद्ध भएँ । त्यसैमा मैले अभिनय गरेँ । त्यो नाट्य समुहमा मेरा सिनियर रंगकर्मीहरु हुनुहुन्थ्यो बद्री अधिकारी र मुकुन्द श्रेष्ठ । त्यसैबेला मैले सार्बजनिक प्रदर्शनका लागि पहिलो अभिनय गरँे । त्यो नाटक दमक बजारमा देखाइएको थियो । त्यसै बेला मलाई अभिनयमा केही कुरा सिकेँ जस्तो लाग्यो । चिनेका सबैले जागिर खाएको देख्दा ‘धत् कस्तो ठाँउमा आएछु’ जस्तो हुन्थ्यो । तर साथीहरुले ‘तँ त ठूलो मान्छे भइस् नि’ भन्थे, म खुसीले दङ्ग पर्थेँ । जीवन भनेकै यस्तै रैछ, अर्काको खुसी छिटै देखिने, आफूभित्रको खुसी खोजी गर्नु पर्ने ।
पछि आइए पढ्न काठमाडांै आएँ । प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा त्यसबेला कलाकारका लागि प्रत्येक वर्ष एकबर्षे कोर्षको तालिम खुल्दोरहेछ । त्यसमा म पूर्वाञ्चलबाट छनौट भएँ । म बिहान ट्रेनिङ लिंदै दिउसो त्रिचन्द्र कलेज पढ्ने गर्थँे । कला भनेको समाजबाट लिएर समाजलाई नै पस्कने कुरा रहेछ । कलाका हरेक कुरा जीवनसँगै सम्बन्धित हुन्छन् । मलाई लाग्छ कला नै जीनव हो र जीवन नै कला । जीवनको भूमिका निभाउने मान्छे सबै भन्दा ठूलो अनुभवी हो । कलाकार सबै भन्दा बढी जीवन बुझेको हुन्छ । जीवन भोगाईकै रिफ्लेक्ट हो अभिनय । प्रायः म भिलेन म प्रायः भिलेन रोलमा खेल्थेँ, त्यसले जुन म्यासेज दिनुपर्ने हो त्यो दिन्थ्यो । त्यो कसरी थाहा हुन्थ्यो भने बाहिर हिंड्दा वा कसैले भेट्दा, उ त्यो सिरियल वा त्यो फिल्मको गुण्डा आयो भन्थे । त्यसले म भित्रको कलाकार सफल भएर जिउँथ्यो तर, मेरो मन भने मथ्र्याे । किनभने रियलमा त म एक साधारण मान्छे हुँ नि । हेर्नुन त ! के म गुण्डा जस्तो देखिन्छु ? । म कलाकार हुँ, यसको बिकल्प मैले कहिल्यै सोचिनँ, कलाकार भएरै बसँ । आज सबै साथी कहाँ कहाँ पुगे म कलाकार नै रहेँ । उनीहरुलाई भेट्यो भने वाह ! तेरो त दामी छ नि भन्छन् । अनि सबैले मायाले बोलाईदिन्छन्, यही त रहेछ खुसी हुने कुरा । ३५ बर्ष भएछ कलाकारितामा लागेको । अब छोड्ने त कुरै भएन । जीवनको अन्तिमसम्म पनि कलाकारितामै हुन्छु । यही काम गर्दागर्दै मर्ने मन छ । अरु केही चाख छैन । अझ सक्रिय रुपमा यही पेशामा लाग्छु । दर्शकको माया पाएको छु, यो भन्दा बढी केही चाहिँदैन । यस क्षेत्रमा नलागेको भए के हुन्थेँहोला भनेर पनि कहिल्यै सोचिनँ । काम गर्दा निराशा पनि आयो, नआएको होइन । कति पटक बिरक्त पनि भइयो । तर बाटोमा कतै देख्दा दर्शकले तारिफ गर्छन्– तपाईको रोल कति राम्रो ! ओहो अस्तिको फिल्ममा कति राम्रो दाइ ! ल बाबु राम्रो छ ! यस्तै यस्तै तारिफ, सम्मान र मायाले यसमै लागिरहन झक्झक्याइरह्यो । ४० वर्ष पहिले मैले अभिनय गरेको ‘टाढाको बस्ती’ नामको सिरियलमा मैले ‘काजी बा’को रोल निभाएको थिएँ । त्यस्तै ‘दुई दिनको जिन्दगानी’मा एक सकरात्मक पात्रको रोल मैले गरेँ । त्यसपछि बाटोमा भट्नेले पनि ‘वाह ! तपाईको जस्तै परिवार सबै नेपालीको होस् भन्थे । अर्को पुष्पाञ्जली भन्ने सिरियलमा खलनायकको भूमिका निभाएको थिएँ । त्यो पनि निकै चर्चित भयो । छोरीहरु हाँसेको, खेलेको देख्दा खुब खुसी लाग्थ्यो । उनीहरुको मुस्कानमा आफ्ना सबै पीडा भुलिन्थ्यो । घर चाँडै जाउँजस्तो हुन्थ्यो । अहिले आफ्ना पीडा बिर्सने खुसी आफैं भित्र उमार्नु पर्छ ।
दुई आनन्द आनन्द लिन सक्दा यो जति आनन्द केहीमा छैन । एक त समाजका पात्रको रोल आफंै गर्दा त्यसले सकारात्मक बन्न सिकाउँछ । साँच्चै भन्दा कलाकारले दुई तरिकाले जीवन बुझुन सक्छ । एक आफ्नो धरातलको र अर्को अभिनयको । उ धेरै अनुभवी बन्छ । कति त पैसाबिना पनि काम गरियो । चिनेका सबैले जागिर खाएको देख्दा ‘धत् कस्तो ठाँउमा आएछु’ जस्तो हुन्थ्यो । तर साथीहरुले तँ त ठूलो मान्छे भइस् नि भन्थे, म खुसीले दङ्ग पर्थेँ । जीवन भनेकै यस्तै रैछ, अर्काको खुसी छिटै देखिने, आफूभित्रको खुसी खोजी नगर्ने । अर्काले के के न गर्यो भनेर बस्ने आफूले के गर्न सक्छु नसोच्ने ।
यो एक्लो जिन्दगी अभिनयकै क्रममा मैले बिना बुढाथोकीसँग बिहे गरेँ । मण्डीखाटारमा हाम्रो घर छ । बिना र मेरा दुई छोरी छन् । तर अहिले बिना र छोरीहरु बाहिर छन् । यहाँ म मात्र बस्छु । १२ बर्ष भैसक्यो उनीहरु बाहिर गएको । अब त एक्लै बस्ने बानी पर्यो । यही एक्लोपन नै मीठो लाग्नथाल्यो । आज भन्दा भोलि भन्दा एक्लै बस्ने जबरजस्त बानी पारेँ । एक्लै नै ठीकै छु । एकान्तमा किताब पढ्छु । मेरो दैनिकी बिहानै उठ्छु दैनिक नित्यकर्म गर्छु । चिया बनाउँछु, खान्छु, अलि ढिलो गरेर खाना खान्छु । धेरै त मेरो घरमा साथीहरु हुन्छन् । प्रायः एक्लै खाना चाहीँ खादिनँ । म आफ्नै हातले खाना बनाएर साथीहरुलाई बोलाउँछु, साथीहरुसँग बसेर खानुजस्तो मज्जा केही लाग्दैन । सुटिङ परेको बेला मेरो पनि खाना घरबाहिरै हुन्छ । अहिले भर्खर पनि सुटिङबाटै आएको हुँ । ‘भुइँ मान्छे’ भन्ने फिल्म सुटिङ चलिरहेको छ । बाहिरबाट छिटो घर आउँदा ओहो ! छिटो आइस् भनेर खुसी हँुदै स्वागत गर्ने र ढिलो आउँदा कहाँ केमा अल्झिस् भनेर सोध्ने मान्छे हँुदैन । खुसी भए पनि आफै, दुखी भए पनि आफैं । सुख र दुःख दुबै मेरा अनन्य साथी हुन् । सुख–दुःख, दुबै आफन्त एक्लै बस्दा पनि रमाइलो हुन्छ र ? मलाई धेरैले यो प्रश्न सोध्छन् । जीवन कसरी खुसी र सुखी बनाउने आफैंले हो । भोग्न त हामी सबै सुख–दुःख एक्लै भोग्छौं । तर, मान्छेको स्वभाव के हुनेरैछ भने आफ्ना सुख पनि अरुलाई देखाउनु पर्ने र दुःख पनि अरुसँग बाड्नु पर्ने । मेरो जीवनमा केही भिन्नता छन् मलाई दुःख कति छ र मेरो खुसी के हो भनेर सुनिदिने मान्छे छैन । म एकदमै साधारण मान्छे हुँ, साधारण नै बनेर बस्न रुचाउँछु । जीवनसँग केही गुनासो छैन, गुनासो गर्न होइन जीवन भोग्नैका लागि हो । दिक्दारी बढेका बेला कहिलेकाहीँ कसैसँग दुःख साट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर, दुःख र खुसी सबै आफैसँग साट्छु । बाहिरबाट छिटो घर आउँदा ओहो ! छिटो आइस् भनेर खुसी हँुदै स्वागत गर्ने र ढिलो आउँदा कहाँ केमा अल्झिस् भनेर सोध्ने मान्छे हँुदैन । खुसी भए पनि आफै, दुखी भए पनि आफैं । सुख र दुःख दुबै मेरा अनन्य साथी हुन् । छोरीहरु हुँदा उनिहरु हाँसेको, खेलेको देख्दा खुब खुसी लाग्थ्यो । उनीहरुको मुस्कानमा आफ्ना सबै पीडा भुलिन्थ्यो । घर चाँडै जाउँजस्तो हुन्थ्यो । अहिले आफ्ना पीडा बिर्सने खुसी आफैं भित्र उमार्नु पर्छ । लामो योजना छैन जीवनको धेरै लामो योजना मैले कहिल्यै पनि बनाइनँ । एकएक बर्षको योजना बनाउँछु र प्रायः मेरा योजनामा म सफल भएको छु । नाटक गर्दा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाटक महोत्सबमा बेष्ट एक्टर, बेष्ट डाइरेक्टर अवार्ड पाएको छु । त्यसैगरी गोदावारी बेष्ट टेली फिल्म डाइरेक्टर अवार्ड बेष्ट एक्टर अवार्ड, बेष्ट फिल्म सपोर्टिङ अवार्ड, गोर्खा दक्षिणबाहु २०६०, त्यस्तै तीन दर्जन जति अवार्ड पाएको छु । युवा अबस्थामा हुन्छ नि, त्यो उत्श्रृङ्खलता, त्यो उरन्ठेउलोपना, त्यो बदमासी कहिल्यै आउन पाएन । त्यो बेला काममै बित्यो । अहिले बाहिर बसेर केही मुख छोडेर खाना खाँदा, पानीमा भिज्दा अति नै डर लाग्छ, कारण बिमारी परेँ भने कस्ले हेर्छ जस्तो लाग्छ ।